जसले प्रेम घर फर्के, को काकेशस थियो जोरजियन भोजन। त्यसैले तपाईं भान्सा chakhokhbili प्ले गर्न चाहनुहुन्छ, lobio, sacivi ... खुसीको व्यञ्जनहरु संग पुस्तकहरू प्रार्य गठन भोजन हामी पर्याप्त प्राप्त गर्न सक्छन्। तर जहाँ कुनै प्रसिद्ध जोरजियन मसला? र यदि hops-suneli अरू यसलाई प्राप्त गर्न सक्छन् - यो बजार मा र पनि सुपरमार्केट मा, त्यसपछि के अरूको? तिनीहरूले परस्पर हुनुहुन्छ? के आफ्नो अभाव अप गर्न सक्छन्? यहाँ हामी अक्सर suneli मसला utsho मासु, माछा र तरकारी व्यञ्जन व्यञ्जनहरु पाइन्छ कुरा हुनेछ। के छ, यसको संरचना कस्तो छ, र तपाईं बजार मा उहाँलाई चलान भने, गुणस्तर उत्पादन जस्तो हुनुपर्छ - यो लेख हेर्नुहोस्।
नाम को एटिमोलजी
पहिलो चरण यो वाक्यांश मा दोस्रो अवधि को अर्थ स्पष्ट छ। जोरजियन मा "Suneli" - राम्रो गन्ध सुकेको मसला। त्यो खाद्य पदार्थ अनुभवी जो सबै सुगन्धित जडीबुटी, यो शीर्षक दाबी छ। बीचमा लामो श्रृंखला कम्तिमा Kondara-suneli सम्झन सक्नुहुन्छ। यो केवल सुकेको र धनिया milled छ। पहिलो अवधि - "utsho" - अर्थ शाब्दिक "प्रतिद्वन्द्वीको।" कसरी? यो उमेर-पुराना जोरजियन utsho मसला suneli, "विदेशी मसला" को रूपमा अनुवाद? त्यहाँ एक विवरण यस घटना हो। को बिरुवाहरु को बीउ ताजा गन्ध धेरै inexpressive utsho भन्ने तथ्यलाई। मात्र पछि उज्यालो बरस रही र स्वाद सुखाने पूर्णतया प्रकट गरिएको छ। संयंत्र विदेशी गन्ध प्राप्त भने।
मसला suneli Utsho: संरचना
हामी यो अवधि भद्दा विदेशी मेथी बोट लुकाउँछ अन्तर्गत, यो टाउको शेफ को सुरुमा स्पष्ट छैन भनेर भन्न भने। रूस, युक्रेन, बेलारुस - यी फलियां को Subtropical Georgia बाहिर बढ्न केही जो धेरै प्रकार छन् भन्ने तथ्यलाई।
तर तपाईं Trigonella को ल्याटिन नाम रोपेर भने, यो उहाँले एक वास्तविक utsho मसला suneli गर्नेछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। यो विशेष मसला को संरचना - निलो मेथी सुकेको र podroblennye बीउ कोसा। ल्याटिन नाम जडीबुटी - Trigonella caerulea। घास (Trigonella foenum-graecum) - म मेथी को अर्को प्रकारको को प्रार्य गठन भोजन मा प्रयोग गरिन्छ भनेर भन्न हुँदैन। मेथी मेथी वा ग्रीक - Georgia, Shambhala भनिने मसला, युरोप, जहाँ यो अक्सर मिठाई उत्पादन लागि प्रयोग गरिन्छ, र मा।
utsho-suneli प्रयोग कहाँ
यो मसला प्रयोग यसको नाजुक nutty स्वाद कारण छ। कि यो माछा, पाठो असल स्वाद जोड छ। यो पनि चिकन एउटा विशेष piquancy दिन्छ। यो जोरजियन भोजन पागल को व्यापक प्रयोग बनाउँछ भन्ने ज्ञात र तिनीहरूलाई पूर्ण utsho छ। नीलो मेथी बस यो सस satsebeli मा बेबदल छ। यदि मसला पाउन्ड, त्यसपछि यो पाउडर envelop basturma। पनि लागि मसला आवश्यक खाना पकाउने Abkhaz adzhika, lobio। पहिलो व्यञ्जन (मासु र माछा broths) utsho नै admirably प्रकट: बस चिम्टी र पकवान साँचो जोरजियन हुनेछ। तर घास गर्न नीलो विरोध रूपमा र मेथी, एक कम तीता छ। जोरजियन भोजन मा मेथी परीक्षण (विशेष गरी रोटी) को लागि प्रयोग गरिन्छ।
म hops-suneli मा मेथी प्रतिस्थापन गर्न सक्छ?
शब्द को सख्त अर्थमा - छैन। Hops-suneli - एक जटिल, राम्रो-सन्तुलित मसला को मिश्रण छ। यो तेह्र मसला comprises। यो सूची बीच, त्यहाँ पनि नीलो मेथी छन्। कुनै घाँस यो ध्वनि सुरिलो अर्केस्ट्रा को, सबै स्वाद हावी छैन भनेर तर hops को संरचना बाहिर राखे। मात्र केही व्यञ्जन utsho-suneli प्रतिस्थापित हुन सक्छ। यो मसला विशेषता स्टोर "प्रार्य गठन राष्ट्रियता को व्यक्ति" वा बजार मा पाउन सकिन्छ। मास्को, यो हेर्न गर्न सिफारिस गरिएको छ Dorogomilovsky बजार। रूसी हजुरआमा herbalist मेथी यसको फूल समयमा संकलित, तर सुकेको को stems र पात बेच्न। र आवश्यक कोसा र leguminous बिरुवाहरु को अनाज स्पाइस गर्न। पश्चिमी युरोप मा, नीलो मेथी पनि प्रयोग गरिएको छ। यसको पात "हरी" पनीर संग रंगीन छन्।
को "सही" मसला utsho कसरी चयन गर्न
उच्च-ग्रेड suneli मात्र मेथी कोसा देखि उत्पादन utsho। भित्र Boll सानो मटर जस्तै अन्न, पकने, तर धेरै ठोस। तिनीहरूले गर्मी-जस्तो कफी गर्न subjected छन्, र त्यसपछि milled। हरियो राम्रो उत्पादन को रंग, अँध्यारो नजिक। कम ग्रेड र सस्तो utsho प्रयोग र बालाको, जस्तै बोट यी भागहरु गंध गर्दैन जो, स्वाद को तीव्रता कम छ मा। प्रामाणिक मसला धूलो गर्न जमीन गर्नुपर्छ छैन - त्यसैले यसलाई hops-suneli को एक भाग भए मात्र चोट छ। उत्पादन लायक खरीद निर्वात पैक।
यसको सुगन्ध मा तातो भाँडा व्यग्र प्रकट गरिनेछ: utsho देखि आ बेहोश गन्ध depressing छैन। Georgia सजिलै मेथी (मेथी घास) फेला पार्न बाहिर र सावधान। को स्वाद मा केही भारतीय तीता उपस्थित हुन हुँदैन!
के utsho जान्छ
मेथी - मसला विशेषता। यो तेज स्वाद softens कायेन्ने मरिच को र मीठो लाल शिमला खुर्सानी evens। lobio मा sacivi मा तेल, nutty स्वाद intensifies एक भावना दिन्छ। तपाईं "प्रार्य गठन स्पर्श" मासु एक पकवान दिन चाहनुहुन्छ भने, suneli धनिया (cilantro बीउ) संग संयुक्त, दिलकश, लसुन र रातो खुर्सानी को एक सानो बिट utsho प्रयोग गर्नुहोस्। मसला अर्को सफल संरचना - hops-suneli, adzhika, कटा धनिया संग मेथी। Svaneti देखि नुन - तपाईं एउटा प्रामाणिक utsho-suneli फेला पार्न पर्याप्त भाग्यमानी छन् भने, "svanuri Marilee" को लागि हेर्न। यो नीलो मेथी प्ले भायलिन हुन्छन्। तर त्यसपछि पकवान नुन थप्न छैन आवश्यक छ। खैर, रूस मा मेथी पनि नीलो क्लोभर, बाख्रा तिपतिया, gunboy भनिन्छ।
सहिजन तालिका: व्यञ्जनहरु, उत्पादन
लाभ र kiwi को हानि - विचार furry हरियो फल नजिक
को स्मोलेन्स्क चिहान मा Xenia मण्डप
Partridge: प्रजनन र घर मा मर्मतका। प्रजनन र व्यापार रूपमा घरमा partridges को मर्मतका
नाम परिवर्तन गर्दा मेरो पासपोर्ट छ? कसरी लामो मेरो राहदानी गर्छ
Hedgehogs खान भनेर? रोचक तथ्य
को RSFSR को आपराधिक कोड को लेख 58: प्रति-क्रान्तिकारी गतिविधिहरु लागि जिम्मेवारी
समानता र अवधारणाहरु बीच मतभेद: करिश्मा र passionarnost के हो
कसरी साँच्चै 10 किलो एक हप्तामा वजन गर्न
भोल्वो CX99: समीक्षा, विशिष्टता र समीक्षा